ငွေထုတ်ယူရန် အချိန်မည်မျှကြာမည်နည်း? – FBS
အခြားနိုင်ငံသို့ ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ပါသည်။ ဘယ်လိုထုတ်ယူနိုင်မလဲ?
ကတ်မှတဆင့် ငွေသွင်းခဲ့ပါသည်။ ခုခါ ငွေဘယ်လိုထုတ်ယူနိုင်မလဲ?
ကတ်အတုမှတဆင့် ငွေသွင်းခဲ့သည်။ ဘယ်လိုထုတ်ယူနိုင်မလဲ?
"ငွေမလုံလောက်ပါ" မှတ်ချက်ကို ကျွန်တော်တွေ့သည်။
ကုမ္ပဏီ၏ဘဏ္ဍာရေးဌာနသည် ဖောက်သည်များ၏ ငွေထုတ်ခြင်း တောင်းဆိုချက်များကို ဦးရာလူစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ ထည့်စဉ်းစားပေးပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ္ဍာရေးဌာနသည် ငွေထုတ်ရန်တောင်းဆိုမှုကို အတည်ပြုသည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ ရန်ပုံငွေများကို ပေးပို့ပါသည်၊ သို့သော် ၎င်းကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် ငွေပေးချေမှုစနစ် တွင် မူတည်ပါသည်။
အီလက်ထရွန်နစ် ငွေပေးချေစနစ် ငွေထုတ်ယူမှုများ (Skrill, Perfect Money စသဖြင့်။) ချက်ချင်းထည့်ပေးသွားသင့်သည်၊ သို့သော် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ၃၀မိနစ်ထိ ကြာနိုင်ပါသည်။
သင်၏ကတ်သို့ ငွေထုတ်ခဲ့ပါက၊ ကျေးဇူးပြု၍ ငွေများထည့်သွင်းရန် ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၃-၄ လုပ်ငန်းရက်ကြာနိုင်ကြောင်း အသိပေးလိုပါသည်။
ဘဏ်ငွေလွှဲငွေထုတ်ယူမှုများကို ပုံမှန်အားဖြင့် ၇-၁၀ လုပ်ငန်းရက်အတွင်း ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဘစ်ကွိုင်အရောင်းအ၀ယ်အားလုံးကို အတူတကွဆောင်ရွက်သောကြောင့် ဘစ်ကွိုင်walletသို့ ငွေထုတ်ရာတွင် မိနစ်အနည်းငယ်မှ ရက်အနည်းငယ်အထိ ကြာနိုင်ပါသည်။ လူအများမှ ငွေအလွှဲအပြောင်းတောင်းဆိုမှု တစ်ချိန်တည်းပြုလေ၊ ငွေလွှဲပြောင်းချိန် ပိုကြာလေဖြစ်သည်။
ငွေပေးချေမှုအားလုံးကို ဘဏ္ဍာရေးဌာန၏ အလုပ်ချိန်အတွင်းအရသာ ဆောင်ရွက်ပါသည်။
FBS ဘဏ္ဍာရေးဌာန၏ အလုပ်ချိန်များမှာ: တနင်္ဂနွေနေ့ ၁၉:၀၀ (GMT+3) မှ သောကြာနေ့ ၂၂:၀၀ (GMT +3) နှင့် စနေနေ့တွင် ၀၈:၀၀ (GMT+3) မှ ၁၇:၀၀ (GMT+3)။
ကျေးဇူးပြု၍ ငွေအလွှဲအပြောင်းမှတ်တမ်း တွင် သင့်ဘဏ္ဍာရေးတောင်းဆိုမှုများ၏ အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်နိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။